Global Voices teny Malagasy » Aparitak’i Shina Ho Amin’ireo Mpahao Hetsi-panoherana Ny Orinasa Manodina PX ao Shanghai Ny Polisy Sy Ny Mpanivana Aterineto · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jolay 2015 1:51 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika avylavitra
Noravan'ny polisy nitàm-piadiana ny vahoaka tamin'iny faran'ny herinandro lasa iny ary notereny ireo voasambotra mba hanasonia “antoka” iray  hoe tsy hanao hetsi-panoherana hanohitra ny PX indray. Nasian'ireo Shinoa manampahefana teritery ihany koa ny fahafahana miditra aterineto ary nodioviny tao amin'ny media sosialy izay vaovao momba ireo hetsi-panoherana.
Tany aloha tany, nisy hetsi-panoherana marobe tany amin'ireo tanàn-dehibe toa an'i Dalian, Kunming  sy Xiamen hanoherana ny fanorenana ireo orinasa mpanodina ny PX. Mampanahy ireo mponina eny an-toerana ny ho fahalotoan'ny rivotra iainany ateraky ny paraxylene, ireo vokatra azo avy amin'ny fanadiovan-tsolika ary ireo fampiasa mahazatra amin'ny famokarana tavoahangy plastika sy fibra izay mitondra poizina ho an'ny olombelona.
Ho fampangatsiahana ny hatezeram-bahoaka, navoakan'ny governemanta ny fanambaràna iray tao amin'ny Weibo, media sosialy shinoa iray malaza  tamin'ny 26 Jona, mitaky ny hampiatoana ny fanadihadiana ara-tontolo iainana momba ilay tolokevitra famindràna toerana. Betsaka ireo sorabaventy “fampitsaharana-ny-ady”  hita teny an'arabe, voalaza ho napetraky ny governemanta, milaza hoe:
Iray amin'ireny tranonkalam-baovao ireny ny NTDTV, nampiresaka maro tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana  momba ny famoretana nataon'ny polisy tamin'ny 29 Jona. Hoy ny lehilahy iray antsoina hoe Shum :
Mety hampihisatra kely ny hetsi-panoherana ny ny PX mandritry ny fotoana voafaritra ireo famoretana an-kerisetra ataon'ny polisy, saingy raha toa i Shanghai, tanàna lehibe ao Shina ho an'ny resaka fikirakiràna vokatra simika avy amin'ny solika, ka tsy mampiato ny fanitarana io karazana indostria iray io, dia hiverina indray ny fifandonana, hoy ny lahatsoratra iray  avy amin'ny bilaogy shinoa Letscorp.net nanamafy :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/07/02/71482/
 hanasonia “antoka” iray: https://twitter.com/lishandeli/status/615990756122058752
 fanambaràna iray tao amin'ny Weibo, media sosialy shinoa iray malaza: http://www.weibo.com/2539961154/ConUZmF3v
 sorabaventy “fampitsaharana-ny-ady”: http://ht.ly/OVVst
 nampiresaka maro tamin'ireo mpanao hetsi-panoherana: http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2015/06/29/a1206965.html
 lahatsoratra iray: http://www.letscorp.net/archives/91154